သင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ခွဲထုတ်နိုင်သော dopamine ဒိုင်းနမစ် (2019) - Your Brain On Porn
သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Dissociable dopamine ဒိုင်းနမစ် (2019)
ဂျက်ဖရီ R. Pettibone,
Lin က Tian,
ဖြစ်သူ Robert T. ကနေဒီ &
သဘာဝ (2019) | ဒေါင်းလုပ်ကိုးကား
ventral tegmental areaရိယာ (VTA) မှနျူကလိယ accumbens (NAc) မှ dopamine projection သည်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်များကြောင့်သင်ကြားခြင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ dopamine သည်လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ထောက်ပံ့သည်ကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ Dopamine cell spiking သည်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အပြုအမူ၏တွက်ချက်မှုသီအိုရီများ၌အရေးကြီးသောသင်ယူမှုအချက်ပြချက်များဖြစ်သည့်ခန့်မှန်းအမှားများကို encode လုပ်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တိရစ္ဆာန်များသည်ဆုလာဘ်များထံချဉ်းကပ်လာသောအခါ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကမြှင့်တက်လာပြီးဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဤမတိုက်ဆိုင်မှုသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ကွဲပြားမှု၊ dopamine cell spiking ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် spike-independent modulation dopamine ထုတ်လွှတ်မှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ထားသော VTA dopamine ဆဲလ်များ၏ spiking NAc dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူတူပင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သည်။ လာမည့်ဆုလာဘ်ကိုညွှန်ပြသည့်အချက်များသည် spiking နှင့် release နှစ်မျိုးစလုံးကိုတိုးပွားစေသည်။ သို့သော် NAc ၏အဓိက dopamine ဖြန့်ချိမှုသည် VTA dopamine cell spiking ပြောင်းလဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲအကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်လည်းအတူတူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်ကွဲပြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအောင်မြင်ရန် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအားမည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ကိုအခြေခံကျသောခြားနားချက်ကိုပြသသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာအချက်ပြမှုသည်သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
Dopamine နာမည်ကြီး '' reward'-ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအတိအကျနှင့်ဆက်စပ်သောသလဲ? တဦးတည်း function ကိုမမျှော်လင့်ဘဲဆုလာဘ်ထံမှသင်ယူခြင်းပါဝငျသညျ။ အန်ကုက်လုပ်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုပစ်ခတ် dopamine ဆဲလ်အတွင်းရှိအကျဉ်းတိုး (RPEs)1,2,3အနာဂတ်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအကောင်းဆုံးအဘို့အချက်ပြ -learning ။ သူတို့ RPEs ပြောင်းလဲနေကြသည်လျှင်အဖြစ် Dopamine ထိန်းသိမ်းရေးသင်ယူခြင်းထိခိုကျနိုငျ4,5,6ဒါပေမယ့်သူတို့ကလည်း dopamine အချက်ပြမှုများကိုဆုလာဘ်မျှော်လင့် (တန်ဖိုး) လျှင်အဖြစ်ချက်ချင်းလှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေ5။ ထို့အပွငျ NAc dopamine dopamine encoding ကတန်ဖိုးတသမတ်တည်း, လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်နေစဉ်အတွင်းကိုအရှိန်7,8,9,10,11.
အနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူ2,12,13, midbrain dopamine ပစ်ခတ်ရန်ခေါင်းကို-fixed တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဂန္ထဝင်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းလေ့လာခဲ့ပြီး3,14, forebrain dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်မတူဘဲ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူပစ်ခတ်နှိုင်းယှဉ်။ ကျနော်တို့ optogenetic မှတ်သားခြင်းသုံးပြီး VTA dopamine အာရုံခံဖော်ထုတ်3,13။ NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာရန်, ငါတို့သုံးလွတ်လပ်သောနည်းလမ်းများ-microdialysis, voltammetry နှင့် optical sensor ကိုအသုံးပြုကြသည် dLight15convergence ရလဒ်များကို -with ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူလတန်းနိဂုံးချုပ် RPE-ခဲ့သည်ဆို၏ VTA dopamine ဆူးပြီးတော့ Activision နေတာသင်ယူမှုများအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်သင့်လျော်သောအတွက်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပေးပေမယ့်အကြောင်း, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်သီးခြား NAc dopamine အတက်အကျ VTA dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အနေဖြင့်လွတ်လပ်စွာပေါ်ထွန်းသည်။
Dopamine key ကို loci အတွက်လှုံ့ဆော်မှုခြေရာခံ
ကျနော်တို့အနေနဲ့ operator '' ဒမြ '' လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ကြွက်များလေ့ကျင့်သင်ကြား5 (သဖန်းသီး။ 1a, ခ) ။ စမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင် nose-poke port ('Light-on') ၏ illumination သည်ချဉ်းကပ်မှုနှင့် ၀ င်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ('Center-in') ။ ကိုင်တွယ်ရမည့်အချိန် (0.5-1.5 s) အပြီးအဖြူဆူညံသံ (Go Go cue) ကကြွက်များကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရန် (Center-out) နှင့်ကပ်လျက်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ('Side-in') ကိုပေါက်စေသည်။ အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုများ၌ဤဘေးထွက်ဖြစ်ရပ်သည်သကြားလုံးကိုစုဆောင်းရန်အတွက်အစားအစာဆိပ်ကမ်း ('Food-port-in') သို့ကြွက်များကိုချဉ်းကပ်ရန်အစားအစာ -Hopper ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။ လက်ဝဲဘက်နှင့်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုများကိုလွတ်လပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေများဖြင့်ဆုချသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတိပေးမှုမရှိဘဲပြောင်းလဲသွားသည်။ ကြွက်များသည်ဆုလာဘ်များပိုမိုရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောအခါ၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့၏ 'latency' တွင် Light-on နှင့် Center-in ကြားရှိအချိန်တွင်ထင်ရှားသည်-သောရှေ့အနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုတွေ (တိုးချဲ့ဖို့ဒေတာကိုပုံ၏ရလဒ်ကိုမှအထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ 1) နှင့်အားဖြင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်း (ပုံနှင့်အတူပြောင်းပြန်ခဲ့သည်ဆို၏။ 1b).
သင်္ဘောသဖန်း 1 ။ Dopamine လွှတ်ပေးရေးအထူးသ NAc core နဲ့ ventral prelimbic cortex အတွက်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့်အတူ covaries ။
a, ဒမြ-တာဝန်ဖြစ်ရပ်များ။ b, ဥပမာ session တစ်ခု။ ထိပ်တန်းတန်း၊ လုပ်ကွက်တစ်ခုစီမှဖြစ်နိုင်ချေများကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် (ဘယ်ဘက် - ညာ)၊ အတန်း ၂ တွင်အစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီ၏ရလဒ်ကိုဖော်ပြသည် (အမြင့်၊ ဆု၊ အတို၊ အဖြေမရ); ဆုသုံးနှုန်း (အနက်ရောင်) နှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အရှိန်မြှင့်မှုနှုန်း (cyan; inverted log စကေး) ၏အတန်းသုံး leaky- ပေါင်းစည်းခန့်မှန်းချက်; အောက်ဆုံးတန်းတူညီသော session တစ်ခု (1 မိနစ်နမူနာ) တွင် NAc core ကို dopamine ။ DA, dopamine ။ cmedial တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ striatum အတွက်ထိပ်တန်း, microdialysis တည်နေရာ (လည်းတိုးချဲ့ဖို့ဒေတာကိုပုံကိုကြည့်ပါ။ 1). n = ကြွက် 51 ကနေ 12 စုံစမ်းစစ်ဆေးတည်နေရာ, အစည်းအဝေးများအကြားလျှော့ချခဲ့2microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူအသီးအသီး။ ဘားအရောင်က dopamine နှင့်ဆုလာဘ်နှုန်းအကြားဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ACC, anterior cingulate cortex; dPL, dorsal ပဏာမ cortex; vPL, ventral ပဏာမ cortex; IL, infralimbic cortex; DMS, dorsal- medial striatum ။ အလယ်အလတ်, dopamine နှင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြား Cross-correlograms ပျမ်းမျှ။ အရက်ဆိုင်များသည်အနီရောင်သည်အရုပ်များအချိန်စီးရီးမှ ၉၉% ကြားကာလကိုပြသည်။ အောက်ခြေ, အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆုကြေးငွေနှုန်း (မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်) အကြားဆက်ဆံရေး။ NA, noradrenaline; 99-HT, serotonin; ACh, acetylcholine; GABA, γ-aminobutyric အက်ဆစ်; glu, အချိုမှု; မိုင်, normetadrenaline; DOPAC, 5-dihydroxyphenylacetic acid; 3,4-MT, 3-methoxytyramine; HVA, homovanillic အက်ဆစ်; 3-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid ။ d, ဆုလာဘ်နှုန်း (လက်ဝဲ), အောင်းနေချိန် (အလယ်) နှင့် NAc core ကို dopamine (ညာ) အပေါ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အသွင်ကူးပြောင်းမှု (ထိုအတွေ့အကြုံရှိဆုလာဘ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းရှိမရှိအားဖြင့်ခွဲခြားခဲ့ကြn = 25) သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား (n = 33) ။ ဒေတာများကို NAc ၏အဓိက dopamine တိုင်းတာသည့် (၁၄) ခုမှ (အချက်အလက်အသစ်နှင့်ယခင်အစီရင်ခံထားသည့်အချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ကြွက်တစ်ကောင်တည်း) မှဖြစ်သည်5 တိရိစ္ဆာန်များ) နှင့်ယုတ်± sem အဖြစ်ကြံစည် edopamine နဲ့ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြားဆက်စပ်မှု၏, Composite မြေပုံ (n = 19 ကြွက်, 33 အစည်းအဝေးများ, 58 စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထား) ။ Paxinos နှင့် Watson, 2005 တို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤကိန်းဂဏန်း၏ ဦး နှောက် Atlas ကောက်ကြောင်းများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူခဲ့သည်51.
ကျနော်တို့အရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်5 mesolimbic dopamine များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီ NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြားဆက်စပ်မှု,16။ ဤတွင်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး '' တကမ္ဘာလုံးထုတ်လွှင့် '' dopamine အချက်ပြနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ဒီဆက်ဆံရေးဟာ forebrain ပစ်မှတ်တလျှောက်လုံးသတိပြုမိနေပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်17, ဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့ငျဒသေဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်သည်ဤဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြား dopamine လွှာမှ-ပျက်စီးခြင်း kinetics ရှိသည်အဖြစ်ဤအ dopamine ဒိုင်းနမစ်, striatum နှင့် cortex အကြားကွာခြားလိမ့်မယ်လို့တွေးဆ18 နှင့်ကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက် dopamine သုံးနိုင်ပါသည်19,20.
မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography-အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry (HPLC-က MS) နဲ့ microdialysis အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ (ပုံ medial တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ striatum စစ်တမ်းကောက်ယူ။ 1c, ဒေတာများသတိုးချဲ့။ 1) ။ ကျနော်တို့တစ်ပြိုင်နက် 21-မိအချိန် resolution နဲ့ 1 neurotransmitters နှင့် metabolites assayed နှင့်အမူအကျင့် variable တွေကို (တိုးချဲ့ဖို့ဒေတာကိုပုံနှင့်အတူဓာတုအချိန်စီးရီးနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဆုတ်ယုတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 2).
ကျနော်တို့ဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့် NAc dopamine-အခြား neurotransmitters (ပုံမတူဘဲအကြားဆက်စပ်မှုပုံတူကူးယူ။ 1c, ဃ) ။ သို့သော်ဤဆက်ဆံရေးမျိုး NAc core ကိုမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည်ကို၎င်း, NAc shell ကိုသို့မဟုတ် dorsal-medial striatum အတွက်ကိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သင်္ဘောသဖန်း (ventral prelimbic cortex အတွက်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်, ဒါပေမယ့်မပို dorsal သို့မဟုတ် ventral ငျဒသေထဲမှာငါတို့အယူအဆဆန့်ကျင်, ငါတို့တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အလားတူ Spatial ပုံစံလေ့လာသည်။ 1c, အီး) ။ မျှော်လင့်မထားတဲ့သော်လည်းတန်ဖိုးကို-related dopamine လွှတ်ပေးရန်ဤအမွှာ '' ဟော့စပေါ့ '' လူ့ neuroimaging အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပြိုင်ရှိသည်: အသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို signal ကိုအထူး NAc နှင့် ventral-medial prefrontal cortex အတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်21.
ကျနော်တို့လာမယ့်ဒီလှုံ့ဆျောမှု-related forebrain dopamine midbrain dopamine ဆဲလ် variable ကိုပစ်ခတ်ရန်အနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိအမှာစကားပြောကြားသည်။ အဆိုပါ NAc core ကို VTA (VTA-ဌ) ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဝေမျှထံမှ dopamine input ကိုလက်ခံရရှိ6,22,23။ ဦးခေါင်း-fixed ကြွက်များတွင် VTA-ဌ dopamine အာရုံခံသတင်းများအရ conditional လှုံ့ဆော်မှုမှယူနီဖောင်း, RPE ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုများ3။ VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကျနော်တို့ (ကိုတွေ့မြင်တစ်ဦး tyrosine hydroxylase (TH) ကမကထအောက်မှာ Cre recombinase ဖော်ပြကြောင်းကြွက်များတွင် channelrhodopsin ၏ Cre-မှီခိုစကားရပ် (AAV-DIO-ChR2) အတွက် adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) နှင့်အတူ VTA ကူးစက် နည်းလမ်းများ) ။ Optrodes (ပုံ။ 2a, ခအကျဉ်းအပြာ-လေဆာပဲမျိုးစုံမှ) မှတ်တမ်းတင်ထားသော Single-ယူနစ်တုံ့ပြန်မှု (ပုံ။ 2c, ဒေတာများကိုသင်္ဘောသဖန်းသီးတိုးချဲ့။ 3, 4, နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 1) ။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောရေတိုအောင်းနေချိန် spikes နှင့်အတူ 27 ကောင်းစွာ-အထီးကျန် VTA-ဌဆဲလ်တွေ့ရှိခဲ့နှင့် dopamine အာရုံခံအဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
။ သင်္ဘောသဖန်း 2: ဖော်ထုတ် VTA dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့်အတူပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။
aလက်ဝဲ, အ 16 မီတာ ၂၀၀ အချင်း optic fiber ပတ် ၀ န်းကျင် tetrodes ၁၆ ခုဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောအစီအစဉ်။ မှန်ပါသည်၊ ဘေးဘက် VTA အတွင်း optrode နေရာချထားခြင်း၏ဥပမာ။ စကေးဘား, 200 မီလီမီတာ။ dopamine ဆဲလ်အနီသည် tyrosine hydroxylase; အစိမ်း၊ ChR1-EYFP; အဝါရောင်ထပ်။ နေရာချထားမှုအားလုံးအတွက် Extended Data Fig ကိုကြည့်ပါ။ 3. b, VTA dopamine ဆဲလ် spikes ။ အနီရောင်ဘား (ကိုမြင်ရတွေ့ရှိပြီးတော့ Activision နေတာများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပေါကျကှဲအတွက် spikes အရေအတွက်ညွှန်ပြ နည်းလမ်းများ) ။ စကေး, 0.5 s ကို, 0.5 mV ။ cတိုးမြှင့်ကြာချိန်၏လေဆာပဲမျိုးစုံရန်, ဥပမာအာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှု။ dတစ်ဦးချင်းစီ VTA ဆဲလ်များအတွက် (ဝက်အများဆုံးမှာ) ဆူး width ကိုနှိုင်းယှဉ်, ကြိမ်မြောက်-ကျယ်ပြန့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်း။ အပြာ, dopamine ဆဲလ် tagged; ယူဆ Non-dopamine အာရုံခံတစ်ဦးကွဲပြားစပျစ်သီးပြွတ်, ခရမ်းရောင်။ Insets ပျမ်းမျှ waveforms (အနုတ်လက္ခဏာဗို့အားအထက်သို့) ၏ဥပမာ။ eဒေါက်တာဘန်ဒင်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း VTA dopamine neuron ၏အမြန်နှုန်း (အပြာ; ၁ မိနစ် bins) ။ ကြာချိန် (cyan) သည်ဆုချီးမြှင့်မှုနှုန်းနှင့်အတူတူသော်လည်းပစ်ခတ်မှုနှုန်းမှာမူမတည်ပါ။ fလူအပေါင်းတို့ VTA အာရုံခံ (အပြာ, dopamine မီးခိုးရောင်, အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသော;; ခရမ်းရောင်, Non-dopamine) အတွက်နှုန်းကိုပစ်ခတ်မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်-rate ကိုလုပ်ကွက်များသာရှိပြီးပြည်ပမှအနိမ့်၌တည်၏။ အဘယ်သူမျှမ (Wilcoxon ရှိသမျှတို့, 1-မိ bins သုံးပြီးရာထူးစမ်းသပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသ P > 0.05 အမျိုးမျိုးသောနှိုင်းယှဉ်များအတွက်ဆုံးပြီးနောက်) ။ g, dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြားပျမ်းမျှ Cross-ဆက်စပ်မှုမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးပြသထားတယ်။ h, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာ dopamine ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းကိုလေ့လာခြင်း (ပုံအဖြစ်အတူတူ format နဲ့။ 1d). n = 95 ဆုလာဘ်တိုး, 76 လျော့နည်းစေသည်။ i။ , ISIS, 0.138: inter-ဆူး-ကြားကာလ (ISIS, လက်ဝဲဘက်) ၏ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဆူးဘက်စ် (ညာ) ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ဆုလာဘ်-rate ကိုလုပ်ကွက်များအကြားမပြောင်းလဲများမှာ (Kolmogorov-Smirnov စာရင်းဇယား P = 0.92; ပေါကျကှဲ, 0.165, P = 0.63) ။
dopamine အာရုံခံအားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့သည်။ အနိမ့်ဆုံးပစ်ခတ်နိုင်သည့်နှုန်းများရှိကြသည်။ P <0.001 တ ဦး တည်းအမြီးမန်း - Whitney စမ်းသပ်မှု) ။ ၎င်းတို့တွင်ပိုမိုကြာရှည်သော spike waveform များရှိသည်။P <5 × 10-6ခြွင်းချက် (ပုံရှိကြ၏ပေမယ့်, မန်း-Whitney စမ်းသပ်မှု) One-tailed ။ 2d), waveform ကြာချိန် vivo အတွက် dopamine ဆဲလ်တစ်ခုမလုံလောက်အမှတ်အသားကြောင်းအတည်ပြုပေးသော3,24။ VTA-ဌအာရုံခံ၏တစ်ဦးကွဲပြားစပျစ်သီးပြွတ် (n တိုတောင်းသော waveforms နှင့်ပိုမိုမြင့်မားပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့်အတူ = အတူတူပင်အစည်းအဝေးများမှ = 38, (> 20 Hz; ဆိုလိုသည် 41.3 Hz, အကွာအဝေး 20.1-97.1 Hz) မျှ tagged dopamine ဆဲလ်များပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားပိုမိုမြန်ဆန် - ပစ်ခတ်ရန်ဆဲလ် GABAergic နှင့် / သို့မဟုတ် glutamatergic ဖြစ်ကြောင်းယူဆသည်3,25နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော '' Non-dopamine '' အဖြစ်သူတို့ကိုရည်ညွှန်း။
ကျနော်တို့မျိုးစုံအပြုအမူတာဝန်များကိုဖြတ်ပြီးအတူတူ dopamine ဆဲလ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်ကျပန်းအစားအစာ-Hopper တွေလည်းကလစ်အချိန်ကုန်ဆုံးစေရန်နှင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်ဤကလစ်ဖို့ဒေတာကိုပုံတိုးချဲ့ (တွေကိုရှေ့အနေဖြင့်ပိုပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည့်အခါပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ 5) ။ ဤသည် Pavlovian တာဝန်များကိုအတွက် dopamine ဆဲလ်များက canonical RPE ကဲ့သို့နိုင်တဲ့ coding နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်2,3,26.
anaesthetized တိရိစ္ဆာန်များအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာ, ယခင်ကစောဒကတက်ခဲ့ပြီး microdialysis နှင့်အတူတိုင်းတာ dopamine အဆင့်ဆင့် dopamine ဆဲလ်များ၏လုပ်သူများပစ်ခတ်မှုနှုန်းပြောင်းလဲမှုကနေပျေါပေါကျကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်27 နှင့် / သို့မဟုတ်မလှုပ်မရှား dopamine အာရုံခံနှိုင်းယှဉ်တက်ကြွစွာ၏အချိုးအစား28။ သို့သော်ဒမြလုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေအသီးအသီးပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ပစ်ခတ်လုပ်သူများ dopamine ဆဲလ်မှုနှုန်း (ပုံဆုချဖို့လစျြလြူရှုခဲ့ပါတယ်။ 2e, ဆ) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာတစ်ဦးချင်းစီ dopamine ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု, သို့မဟုတ်အခြား VTA-ဌအာရုံခံမြားပုံ (higher- နှင့်အောက်ပိုင်း-ဆုလာဘ်လုပ်ကွက်များအကြားရှိ၏။ 2f, ဇ; ref ကိုလည်းကြည့်ပါ။ 29 ဦးခေါင်း-fixed ကြွက်တွေမှာ Concorde ရလဒ်များအတွက်) ။ dopamine ဆဲလ် spikes ၏ပြီးတော့ Activision နေတာပစ်ခတ်ရာမှာနှုန်းမခြုံငုံပြောင်းလဲမှု (ပုံလည်းရှိခဲ့သည်။ 2i) ။ ထို့အပွငျ, ငါတို့တက်ကြွလှုပ်ရှားပြည်နယ်များအကြား switching ဆို dopamine ဆဲလ်စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ မလှုပ်မရှား (ရှည်လျားသောအပြန်အလှန်ဆူးကြားကာလ) သုံးစွဲအချိန် dopamine ဆဲလ်များ၏အချိုးအစားအလွန်နိမ့်ခဲ့, နှင့်သင်္ဘောသဖန်း (higher- နှင့်အောက်ပိုင်း-ဆုလာဘ်လုပ်ကွက်များအကြားမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ 2i).
အဆိုပါ VTA-NAc dopamine စီမံကိန်း၏ခန္ဓာဗေဒပြင်းထန်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်6,22,23, ပစ်ခတ်ရန်အကြားကဒီသိသာ functional ဖြစ်စေမတိုက်ဆိုင်ပေမယ့်ပေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိ-ငါတို့သည် VTA များ၏မှန်ကန်သောအဘို့ကိုအနေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ reconfirmed ။ NAc core ကိုစ retrograde tracer ဝမ်းရောဂါအဆိပ်အတောက် B က (CTb) ၏အသေးစားထိုး TH ၏သိပ်သည်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ရလဒ်+ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ optrode အသံသွင်းကဲ့သို့တူညီသော VTA-ဌဧရိယာအတွင်းအာရုံခံ (ဒေတာများသတိုးချဲ့။ 3) ။ အနီးစပ်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ဇုန်, TH ၏ 21% အတွင်း+ ဆဲလ်တွေကိုလည်း CTb ခဲ့ကြသည်+, ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ tracer ထိုးလုံးဝ NAc core ကိုဖြည့်ပါခဲ့ပါဘူးအဖြစ်, NAc core ကို-ထုတ်လုပ်တဲ့ VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထင်သေးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာ n = 27 tagged VTA dopamine ဆဲလ်များ (ပေါင်းများစွာသောပိုပြီး untagged ဆဲလ်) နီးပါးဆက်ဆက် NAc core- ထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ထပ်ကြွက်တစ်ခုတွင် AAV ကို NAc core (Extended Data Fig) သို့စိမ့်ဝင်ပြီးနောက် tagged VTA-l dopamine ဆဲလ်နှစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ 3) ။ retrogradely ကူးစက်ခံရသည့်ဆဲလ်နှစ်မျိုးလုံးတွင်ပစ်ခတ်မှုပုံစံများရှိပြီးအခြားတံဆိပ်ကပ်ထားသော dopamine ဆဲလ်များနှင့်အလားသဏ္inာန်တူစွာဆင်တူသည်။နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 1) ။ ကျနော်တို့လုပ်သူများ VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို forebrain dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လှုံ့ဆျောမှု-related အပြောင်းအလဲများအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကောက်ချက်ချ။
မျိုးစုံ timescales အပေါ်ခြေရာကောက်လွှတ်ပေးရန်
အချို့သောသီအိုရီအတွက်အကြံပြုအဖြစ်, se နှုန်း NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်လမ်းကြောင်းဆုလာဘ်နှုန်းကိုမ30သို့မဟုတ်ဤဆက်စပ်မှု microdialysis နှင့်အတူဖြေရှင်းရန်လည်းအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပြောင်းလဲနေသောအတက်အကျအားဖြင့်မောင်းနှင်သလဲ? ကျနော်တို့ voltammetry အချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအဆုံးစွန်သောဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်စောဒကတက်5ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ timescales span နိုငျကွောငျး dopamine လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုလွတ်လပ်သောအတိုင်းအတာကို အသုံးပြု. အတည်ပြုချက်ကိုရှာ၏။ မျိုးရိုးဗီဇ encoded optical dopamine ညွှန်းကိန်း၏ dLight1 suite ကို dopamine D1 receptors သို့ circularly permutated GFP ထည့်ခြင်းဖြင့်အင်ဂျင်နီယာခဲ့သည်15။ dopamine ၏ binding ချောင်းအတွက်အလွန်တိကျတဲ့တိုး (ပုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 3a) ။ ကျနော်တို့ dLight1.1 (သုံးကြွက်များကနေလေးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု NAc နေရာချထားမှုကို) သို့မဟုတ်တောက်ပမူကွဲ dLight1.3b ဖြစ်စေဖော်ပြ NAc သို့ AAV ထုံမွှန်း (ခြောက်လလေးကြွက်များကနေ NAc နေရာချထားမှုကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု) နှင့်အမျှင်ဓာတ် photometry ခြင်းဖြင့်ချောင်းကြည့်ခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ဒေတာများသတိုးချဲ့ (ပစ်ခတ်အလားတူ VTA dopamine ဆဲလ်ဖို့, Pavlovian ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်း NAc dopamine တုံ့ပြန်မှုလေ့လာသည်။ 5).
။ သင်္ဘောသဖန်း 3: dopamine တိုင်းတာခြင်း၏ပေါင်းကူး timescales ။
adLight1.3b ၏, ချောင်းတုံ့ပြန်မှု။ Inset, dopamine ၏ titrations (n = အကျိုးစီးပွား 15 ဒေသများ (ROIs) နှင့် noradrenaline (n = 9) ။ အဓိကကိန်းဂဏန်း, ရေချိုး - လျှောက်ထား neurotransmitter (အားလုံး n = 12 ROIs) ။ သူ့, histamine ။ b, ပုံမှန် NAc dLight1.3b signal ကို (1-မိ bins) အပါအဝင်နမူနာဒမြ session တစ်ခု။ c, dLight signal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲစေပါသည်။ n = 35 ဆုလာဘ်မှုနှုန်းတိုး, 45 လျော့နည်းစေပါသည်။ d, dLight နှင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြား Cross-ဆက်စပ်မှု။ e၏ shaded သောအဘို့ကို၏, ပိုမိုနီးကပ်စွာအမြင် b။ မြှား: အနက်ရောင်, Center-နှာခေါင်း -in ကို; အနီရောင်အလင်း၊ ဘေးထွက် (ဆုချ); အပြာနုရောင်, ဘေးထွက် -In (unrewarded); အနီရောင်မှောင်မိုက်၊ အစားအစာ -port ကို (ဆုချသည်); အပြာရင့်၊ အစားအစာ -port (in unrewarded) ။ လာမည့်အတန်း: ဆုလာဘ်မှုနှုန်း၏ leaky- ပေါင်းစည်းခန့်မှန်း; အနိမ့်ဆုံး resolution ဖြင့် dLight (1 min); မြင့်မားသော resolution ရှိ dLight (50 Hz၊ အစိမ်း၊ ၅ မှတ်အလယ်အလတ်စစ်ထုတ်သည့်အနက်ရောင်); စံပြပြည်နယ်တန်ဖိုးများ (cyan); နှင့် RPEs (ခရမ်းရောင်) ။ အတော်အတန်နည်းပါးသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြည်နယ်အဆင့်တန်ဖိုးများသည်အစောပိုင်းကာလတွင်နိမ့်ကျသည်။ ထို့နောက်ဆုလာဘ်များပေးပို့ခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သော RPE နှင့် dopamine သိသိသာသာတိုးလာခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အောင်မြင်သောဆုချီးမြှင့်ခံရသည့်စမ်းသပ်မှုများသည် RPE များကိုလျော့နည်းစေသော်လည်း dopamine ပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူပြည်နယ်တန်ဖိုးများကိုတိုးမြှင့်သည်။ f, က Short timescale crosscorrelations dLight နှင့်တန်ဖိုးအကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပြသနှင့် RPE မှသေးငယ်တဲ့ဆကျဆံရေး။ gကွဲပြားခြားနားသော lags နှင့်အတူမော်ဒယ် variable တွေကိုနှင့် dLight အကြားအတွင်း - ရုံးတင်စစ်ဆေးဆက်စပ်မှု; တန်ဖိုးနှင့် RPE နှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်နွယ်မှုသည်နောက်ပိုင်းတွင် 0.3 s နောက်ပိုင်းတွင် dLight အထိအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ hလူအပေါင်းတို့အစည်းအဝေးများများတွင်အများဆုံးဆက်စပ်မှု RPE သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းသည်ထက်တန်ဖိုး သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဒမြလုပ်ငန်းတာဝန်, ကြှနျုပျတို့ပထမဦးဆုံး 1-မိ bins (ပုံထဲမှာ dLight signal ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ 3b) microdialysis နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့။ ကျနော်တို့ကိုတဖန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှု (ပုံ၏ Cross-ဆက်စပ်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှစ်ဦးစလုံးအတွက် NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမြင်တော်မူ၏။ 3c, ဃ) ။ ကျနော်တို့လာမယ့်ဒီဆက်နွယ်မှုပေါ်ပေါက်ပုံကိုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားဖြည်းဖြည်းချင်းမိနစ်တစ် timescale အပေါ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသည်ထက်, dLight signal ကိုတစ်ဦးချင်းစီတရားခွင် (ပုံအတွင်းနှင့်အကြားမြင့်မားတဲ့ dynamic အတက်အကျပြသခဲ့သည်။ 3e) ။ ကျနော်တို့ကအားဖြည့်-သင်ယူမှုပုံစံကနေခန့်မှန်းချက်ချင်းပြည်နယ်တန်ဖိုးများနှင့် RPEs (က Semi-Markov ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စဉ်ကိုဤအတက်အကျနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ5) ။ ယခင်က voltammetry သုံးပြီးအစီရင်ခံခဲ့သည်နှင့်အမျှ5, အခိုက်-by-ယခုအချိန်တွင် NAc dopamine ပြည်နယ်တန်ဖိုးများ (ပုံနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ 3f), ဆုလာဘ် (ပုံမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်သည့်အခါစမ်းသပ်မှုတွေအတွင်းလုပ်မယ်လို့အဖြစ်မြင်နိုင်။ 3e) ။ ငါတို့သည်လည်း RPE (အောက်တွင်ဆန်းစစ်) နဲ့ကိုက်ညီလျော့နည်း-မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်ပေးပို့အတူယာယီတိုးမြှင့်ကိုမြင်တော်မူ၏။ တိုင်း dLight session တစ်ခုမှာတော့ dopamine RPEs သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်မှုနှုန်း (ပုံဖြစ်စေထက်တန်ဖိုးများနှင့်အတူအားကောင်းဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ 3h, ဒေတာများသတိုးချဲ့။ 6) ။ ပြည်နယ်တန်ဖိုးများနှင့် RPE နှစ်ခုစလုံးနှင့်ဆက်စပ်မှုသည် dLight signal ကို ~ 0.3 s အကြာတွင်လေးစားမှုနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးခဲ့ကြသည် cues နှင့်အာရုံခံ - တုံ့ပြန်မှုအချိန် (ပုံ။ ) ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျဉ်းနောက်ကျနှင့်ကိုက်ညီ 3g; voltammetry ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 0.4 s ၏နောက်ကျရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။5.
ကျနော်တို့လာမယ့်ဒမြ-တာဝန်ဖြစ်ရပ်များန်းကျင် dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဖြန့်ချိနှိုင်းယှဉ်။ အလင်း-အပေါ်မှာပြင်ပလှုံ့ဆော်မှု, cue သွားပြီးဆုခခြံဘေးထွက်-in ကို (စားနပ်ရိက္ခာ-Hopper တွေလည်းကလစ်) တစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးလျှင်မြန်ပစ်ခတ်ရန်တိုး (ပုံ evoked ။ 4a) ။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှု dopamine ဆဲလ်တွေ (ပုံ၏ကြီးစွာသောအများစုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ 4c), ကွဲပြားခြားနားသောတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုများ၏ဆွေမျိုးပြင်းအား (ဆဲလ်ဖို့ဆဲလ်ကနေကွဲပြားပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 1) ။ အဆိုပါ NAc dLight signal ကိုလည်း, ဤအဓိကတွေကို (ပုံ၏တစ်ဦးချင်းစီမှလျှင်မြန်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ 4b, c ကို), dopamine လွှတ်ပေးရန်ကားမောင်း dopamine ဆဲလ်ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်နှင့်ကိုက်ညီ။
သင်္ဘောသဖန်း4။ Phasic VTA dopamine ပစ်ခတ်ရန် NAc dopamine ဒိုင်းနမစ်များအတွက်အကောင့်မထားဘူး။
aVTA-ဌ dopamine ဆဲလ်၏, Event-aligned လှုပ်ရှားမှု။ ထိပ်, တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဆဲလ်များအတွက် rasterizer နှုန်းကိုမြင့်တက်; အောက်ခြေပျမ်းမျှဆူးနှုန်း (n = 29) ။ အားလုံး panel များတွင်အမှားကြိုးနှင့်ချည်နှောင်± sem ညွှန်ပြ b, Event-aligned NAc dLight ။ ထိပ်, ကိုယ်စားလှယ် session တစ်ခု; အောက်ခြေပျမ်းမျှ (n = 10), အထွတ်အထိပ်ဆု Side-in ကိုတုန့်ပြန်မှပုံမှန်။ ဤပုံတစ်ပုံလုံးတွင် dLight အချက်ပြမှုသည် ၂ စက္ကန့် 'အခြေခံ' ယုဂ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Center-in မတိုင်မီ ၁ စဖြစ်သည်။ Center-in နှင့် Food-port-in မတိုင်မီလေးတွင်မြှား (မြှား) များတိုးလာသည်။ c, dopamine ဆဲလ်တွေ (အစိုင်အခဲအဘို့သိမ်းယူအချိန်တိုးပွားလာသောဖြန့်ဝေ; n = 29), dLight (dashed; n = 10), အောက်ပါ cue onsets တိုးမြှင့်ဖို့ (အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက shuffle စမ်းသပ်မှု, 10,000 shuffles, P <0.01, မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်တညျ့။ Light-on အတွက်၊ latency <1 s သာပါ ၀ င်သည်။ Side-in ကိုသာဆုစမ်းသပ်မှုတွေ။ ပျမ်းမျှ latency များ (sigmoid fit မှ) - အလင်းချိန်၊ ၁၅၂ ms၊ dLight 152 ms; 266 ms, dLight 67 ms ပစ်ခတ်, cue, go Side-in, 212 ms, dLight 85 ms ပစ်ခတ်။ dopamine မဟုတ်သောဆဲလ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် cue onsets (Extended Data Fig) ။ 8). d, ထူးခြားသော cue-evoked, ချဉ်းကပ်-related dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ထိပ်တန်းပျမ်းမျှ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ် (n = 29); အလယ်အလတ်၊ ပျမ်းမျှ dLight (n = 10); အောက်ခြေ, voltammetry (n = 6), တိုတို - latency အလင်း -on ကိုတုံ့ပြန်မှုအထွတ်အထိပ်မှပုံမှန်။ လက်ဝဲ panel များ, latency <1 s, ညာ, latency>2s ။ အချက်အလက်များကို Light-on (အစိုင်အခဲ) သို့မဟုတ် Center-in (အစက်) ဖြင့်ညှိထားသည် အနီရောင် dashed လိုင်း, ပျမ်းမျှ latency ။ ပိုမိုကြာရှည်သော latency များအတွက် Center-in အနီးတွင်ပစ်ခတ်မှုတိုးလာခြင်းမရှိသော်လည်း dLight နှင့် voltammetry သိသိသာသာတိုးလာသည်။ eအလင်း-On အပေါ် aligned အထွတ်အထိပ်အချက်ပြမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ဖြန့်ကြဲကြံစည်မှု (y ဝင်ရိုး) သို့မဟုတ် Center က-in ကို (x ဝင်ရိုး) ။ ဆဲလ်တစ်ခုစီအတွက်၊ ချိတ်ဆက်ထားသောလိုင်းများသည်ကွဲပြားသောအောင်းနေချိန် (<1 s,>2s) အတွက်အချက်အလက်များဖော်ပြသည်။ Dopamine ပစ်ခတ်မှု (အပေါ်) သည်တိုတောင်းသော latency စမ်းသပ်မှုများအတွက်အလင်း -on တုံ့ပြန်မှု (ကှဲလှဲ၏နှစ်ဖက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (ANOVA), alignment ကို× latency အပြန်အလှန်, တသမတ်တည်းပြသ F = ၆၈.၃၃၊ P = 0.0008) ။ dLight (အလယ်)၊ voltammetry (အောက်ခြေ) အချက်ပြများသည်စင်တာ -In (dLight အတွက်နှစ်ဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ANOVA: alignment × latency interaction)၊ F = ၆၈.၃၃၊ P = 0.0043) ။ f, ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ထောင့်အဖြစ် quantified ချဉ်းကပ်မှု, စဉ်အတွင်း Dopamine တိုး (ကိုတွေ့မြင် နည်းလမ်းများ) ။ စက်ဝိုင်း (တစ်ဦးချင်းစီ dopamine ဆဲလ်တွေညွှန်ပြn = 29), dLight အစည်းအဝေးများ (n = 10) ။
ငါတို့သည်လည်းကြွက်များအဖြစ် NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိုး (ရုံအစားအစာဆိပ်ကမ်းကို-In မတိုင်မီ) (ကိုယ့်ရေးစင်တာ-In မတိုင်မီ) ကိုစတင်ဆိပ်ကမ်းနှင့်အစားအစာဆိပ်ကမ်းကိုချဉ်းကပ်မြင်တော်မူ၏။ ဤသည်လှုံ့ဆော်ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေ NAc core ကို dopamine အတွက်လျင်မြန်စွာတိုးခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ဟုဖေါ်ပြခြင်းဟာကျယ်ပြန့် voltammetry စာပေနှင့်အတူကောင်းစွာကိုက်ညီ5,7,8,9,10,11။ သို့သော် VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်လူဦးရေသည်ဤအကြိမ် (ပုံမှာပစ်ခတ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုးမပြခဲ့ပါဘူး။ 4a; တိုးချဲ့ဖို့ဒေတာကိုပုံကိုကြည့်ပါ။7Non-dopamine ဆဲလ်ဖို့အပါအဝင်နောက်ထပ်နှိုင်းယှဉ်) သည်။
cue-evoked နှင့်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော dopamine လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွဲထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုများကို (<1 s) နှင့် long (>2s) latency များဖြင့်ခွဲခြားခဲ့သည် (ပုံ။ 4d, အီး) ။ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အတွက်တိုးတသမတ်တည်းဦးစား Short-အောင်းနေချိန်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, အလင်း-အပေါ်မှာ cue စတင်ခြင်းမှသော့ခတ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောပစ်ခတ်ရန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်နှင့်အတူအားလုံးသော 25 dopamine ဆဲလ်အလင်း-အပေါ်ပိုကောင်းရေးစင်တာ-in ကို (ပုံထက်အလင်း-On ဖို့ aligned ပြီးနောက်။ 4e) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Center က-in ကိုမရောက်မီ NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုး cue-evoked dopamine လွှတ်ပေးရေး (ပုံကနေကွဲပြားခဲ့ကြသည်။ 4d, အီး) ။ dLight အချက်ပြမှုများကိုတသမတ်တည်း (ပုံပစ်ခတ် dopamine အတွက်တိုးသက်ဆိုင်ရာခြင်းမရှိဘဲ, အချိန်ကြာမြင့်စွာအောင်းနေချိန်စမ်းသပ်မှုတွေ (တစ်ဆယ်အစည်းအဝေးများထဲကတစ်ဆယ်) အပေါ်နှင့်အစားအစာ-port ကို-in ကို (တစ်ဆယ်အစည်းအဝေးများထဲကကိုး) မတိုင်မီ Center က-in ကိုမရောက်မီတိုးတက်လာခဲ့သည်။ 4f).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်-related dopamine အချက်ပြမှုများမကြာသေးမီဆုလာဘ်သမိုင်းအပေါ်မူတည်ဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏အစောပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစဉ်အတွင်း dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ဆုလာဘ်မှုနှုန်း (ပုံပေါ်တွင်မှီခိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ 5a), လှုံ့ဆျောမှု (ပုံပေါ်တွင်ဆုလာဘ်မှုနှုန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော်လည်း။ 5b) ။ အကျိုးဆက်အနိမ့်ကျသောအခါ Side-in ၌ဆုလာဘ် cue မှ phasic တုန့်ပြန်မှုသည်ယုံကြည်စိတ်ချစွာပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ 5a), အပြုသဘော RPE encoding ကနှင့်ကိုက်ညီ။ ဒီဆုလာဘ် cue ချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်သည့်အခါအနုတ်လက္ခဏာ RPEs ၏ encoding ကလူဦးရေအဆင့်ကို (ပုံမှာလေ့လာဖြစ်စေ, အများကြီးအားနည်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ခဲ့သော်လည်း, dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ဆိုင်းငံ့မှု။ 5a, ခ) သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီဆဲလ်များ (တိုးချဲ့ဒေတာများကိုပုံ။ ) 8) ။ dopamine pause ၏ကြာချိန်များတွင်အနှုတ်လက္ခဏာ RPE များကို encod လုပ်ရန်ယခင်ကအဆိုပြုထားသည်31, ဒါပေမယ့်ဒီရုံပဲတစ် ဦး ချင်းစီအာရုံခံဆဲလ်2ထဲက 29 လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်အားစမ်းသပ်ခြင်းအခြေပြုအားဖြည့်သင်ကြားမှုပုံစံများ (သရုပ်ဆောင်ဝေဖန်သူနှင့် Q-learning) အပါအ ၀ င်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ခန့်မှန်းလျှင်အလားတူရလာဒ်များရရှိသည် (သို့) မကြာသေးမီကရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ (Extended Data Fig ။ ) 8).
သင်္ဘောသဖန်း5။ ဆုကြေးသမိုင်းကွဲပြားခြားနား VTA dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့် NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်သက်ရောက်သည်။
a, ထိပ်တန်း, (dopamine ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းပျမ်းမျှn = 29) Side-in မှညှိနှိုင်း, ဆုချီးမြှင့်မှုနှုန်းအားဖြင့်ပြိုကွဲ (terciles, တစ် ဦး ချင်းစီဆဲလ်အဘို့သီးခြားစီတွက်ချက်) ။ Side-in မပြုမီ, လှုပ်ရှားမှုဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထားပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်။ Side-in ဆု (အနီရောင်) နှင့် unrewarded (အပြာ) စမ်းသပ်မှုတွေသီးခြားစီပြသလျက်ရှိသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းနိမ့်ကျသောအခါအပြုသဘောဆောင်သော RPE များကို encoding နှင့်ကိုက်ညီသည်ဆိုပါကအစားအစာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အောက်ခြေတွင်အမြန်နှုန်းနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားသောပစ်ခတ်မှုနှုန်းရှိသော dopamine ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏အစိတ်အပိုင်း (shuffle test, P <0.01, မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်တညျ့။ ထိပ်ဆုံးရှိအမှတ်အသားပြုသည့်အမှတ်အသားများသည်ဤအပိုင်းသည်အခွင့်အလမ်းထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည့်အချိန်ကိုဖော်ပြသည်။ P <0.01) ။ Side-in ပြီးနောက်, အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုသာစမ်းသပ်ပြီး - ဖြစ်နိုင်သော RPE coding ဖြစ်ပါတယ်။ b(log-) အောင်းနေချိန် (ထိပ်) နှင့် dopamine Spike အပေါ်မကြာသေးခင်ဆုလာဘ်သမိုင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းမှတျတမျးတငျထား dopamine ဆဲလ်တွေနှင့်အတူအစည်းအဝေးများအဘို့, Regression ကွက်။ ခရေပွင့ (သိသိသာသာဆုတ်ယုတ်အလေးညွှန်ပြt-test, P <0.05) ။ Go cue မတိုင်မီ 0.5 s အတွင်းတွင် (စမ်းသပ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကြွက်သည်ပုံမှန်နှာခေါင်းပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သော်လည်း) dopamine spiking ဆုကိုသမိုင်း (အလယ်) ကမထိခိုက်ပါ။ ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းပြောင်းလဲသွားသည် (အောက်ခြေ၊ ဘေးထွက်ပြီးနောက် ၀.၅ စက္ကန့်အတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏အထွတ်အထိပ်သို့မဟုတ်နိမ့်ကျမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း) သို့သော်စမ်းသပ်မှုများအတွက်သာဖြစ်သည်။ c, dအထက်ပါအဖြစ်တူ, dLight မှလွဲ. (ဘေးထွက်-in ကိုတုံ့ပြန်မှုမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိဖို့ပုံမှန်) ။ Dopamine လွှတ်ပေးရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပင်ဘေးထွက်-in ကိုမရောက်မီဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့်အတူ scales ။
ဘေးထွက်-in ကိုမှာ Dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလည်းအပြုသဘော RPEs ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့, ယာယီ encoding ကပြသော်လည်းမအနုတ်လက္ခဏာ RPEs (ပုံ၏။ 5c, ဃ) ။ ဤသည် dLight တုံ့ပြန်မှုအနည်းငယ်လွှတ်ပေးခြင်းနှင့် reuptake အဘို့ကိုယူအချိန်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, ပစ်ခတ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်တာရှညျခဲ့သည်32ဒါပေမယ့်တစ်ဦး subsecond ဖြစ်ရပ်ဆန်းနျြရစျ။ မကြာသေးမီစမ်းသပ်မှုတွေဆုခခြံခဲ့သည့်အခါပစ်ခတ်မတူဘဲသို့သော်အစောပိုင်းတစ်ခုချင်းစီစမ်း dLight အချက်ပြမှုများ (ပုံ သာ. ကွီးမွတျခဲ့သညျ။ 5c), တန်ဖိုးကို coding နှင့်ကိုက်ညီ။ ကြွက်များသည်တက်ကြွစွာရွေ့လျားနေခြင်းမရှိသည့်တိုင်အောင်ဆုလာဘ်သမိုင်းအပေါ်ဤမှီခိုအားထားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်း Go cue ကိုစောင့်နေစဉ်တွင်ဗဟိုဆိပ်ကမ်းတွင်နှာခေါင်းပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ 5d) ။ ယေဘုယျအား, ငါတို့ NAc dopamine လွှတ်ပေးရန် cue-evoked တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နှစ်ခုလုံးကိုထင်ဟပ်, သာယခင်ကောင်းစွာ VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ကတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုကောက်ချက်ချ။
VTA-ဌပု NAc core ကိုမှ dopamine များ၏မြင်သာထင်သာအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေး6,23,24။ အဆိုပါ NAc core ကိုမှပရောဂျက်သောသူတို့အပါအဝင် VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်တွေ, တသမတ်တည်း RPE-encoding ကပြီးတော့ Activision နေတာကိုပြသ3,12။ VTA ပြီးတော့ Activision နေတာ NAc dopamine ကားမောင်းမှုအတွက်အထူးအရေးကြီးသောဖြစ်ထင်နေကြတယ်32နှင့်အမှန်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် cue-evoked VTA ပြီးတော့ Activision နေတာ NAc လွှတ်ပေးရေးသဖြင့်လိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ဒါ့အပြင်ဖြစ်စေရှည်လျား (လုပ်သူများ) သို့မဟုတ်အတို (phasic) timescales ပေါ် VTA-ဌ dopamine ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးကြသည်မဟုတ်ကြောင်း NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်၏တန်ဖိုးကို-related ပုံစံများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားအ dopamine subpopulations ကွဲပြားအချက်ပြမှုများကိုသယ်ဆောင်စေခြင်းငှါ13,33,34, ကြှနျုပျတို့ဒီမှာကနေမှတျတမျးတငျထား dopamine ဆဲလ် subpopulations ၏ပစ်ခတ်မှု NAc core ကိုအတွက်တန်ဖိုး -related dopamine ထုတ်လုပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုထုတ်မပေးနိုင်ပါ။ သို့သော်မည်သည့် dopamine ဆဲလ်များအတွက်တန်ဖိုးနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ်ခတ်မှုမျိုးကိုလေ့လာမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ NAc dopamine ဒိုင်းနမစ်ကိုမတူညီသောအချိန်များ၊ မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားပြီး dopamine ဆဲလ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသော်လည်း dopamine အချက်ပြများကိုနားလည်ရန်လုံလောက်မှုမရှိပါ35.
dopamine ဆိပ်ကမ်းကနေဖြန့်ချိအစွမ်းထက်ဒေသခံမဟုတ်သော Spike ယန္တရားများကလွှမ်းမိုးနေသည်36,37,38,39,40။ ဥပမာအားဖြင့်, NAc dopamine လွှတ်ပေးရန် VTA Spike pharmacologically နှိမ်နင်းပင်အခါ basolateral amygdala တို့က modulated ဖြစ်ပါတယ်41,42။ ဒါဟာ dopamine လွှတ်ပေးရေးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု dopamine ဆဲလ် Spike သူတို့ထံမှကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအောင်မြင်ရန်အံ့သောငှါဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်ချက်ပြုထားသည်36,43သို့သော်ဤ dopamine ၏သီအိုရီအမြင်များသို့ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမထားပါဘူး။ ကွဲပြား striatal ငျဒသေဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုအထောက်အကူပြုခြင်း, လိုအပ်သည်နှင့်အညီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် dopamine လွှတ်ပေးရန်သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ44။ dopamine ထုတ်လွှတ်မှု၏ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ကျနော်တို့ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာသောနည်းလမ်းသုံးခုအားဖြင့်မျှဝေထားသည့်တစ်ခုမှာကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်အနည်းဆုံး ၁၀၀ µm ၏ Spatial စကေးပေါ်တွင်နမူနာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ in vivo microscopy တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်သေးငယ်သည့်အတိုင်းအတာများအတွင်းသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းရှိနိုင်သည်။15.
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို dopamine ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေနိုင်ကြောင်းမည်သည့်သီးခြားလုပ်သူများ dopamine signal ကို၏တည်ရှိမှုကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ (voltammetry သို့မဟုတ် dLight နှင့်အတူ) လျှင်မြန်စွာတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်မယ့်အစား, (microdialysis နှင့်အတူ) ဖြည်းဖြည်းတိုင်းတာလျှင်နှေးကွေးပေါ်လာကြောင်း dopamine ဆိုင်းလျင်မြန်စွာအတက်အကျသို့ဖြေရှင်းရန်။ ကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်ဖော်ထုတ် VTA dopamine ဆဲလ်ထို့ပြင်အသံသွင်း30 စိတ်ကူးဆန့်ကျင်ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပေး29 ကြောင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် drive ကိုလုပ်သူများအပြောင်းအလဲများကိုပစ်ခတ်လုပ်သူများ dopamine ဆဲလ်များတွင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ လုပ်သူများပစ်ခတ်ရန်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးထိန်းသိမ်းရေးအားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်28ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအလုပ်တွင်မဆိုပစ်ခတ်မှုနှုန်းစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုသတိမပြုမိပါ။ ပစ်ခတ်မှုသည်စိတ်ကျေနပ်မှုအရသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုမျှော်လင့်နေစဉ် ၁ စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင်အောက်သို့ဆင်းနိုင်သည်45,46။ သို့သော်ဤကျဆင်းမှုဆုလာဘ်မျှော်လင့်အတူ dopamine လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအရာကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး, အစားယာယီအနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများတဲ့ sequence ကိုပိုပြီးအကြံအစည်ဖြင့်သမုတ်သော47။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆုလာဘ်နှုန်းမှာကုဒ်သွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အချက်ပြမှုများ computationally အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်30, dopamine အစားလျှင်မြန်စွာပွောငျးလဲနေသောအမှားနှင့်တန်ဖိုးအချက်ပြမှုများကိုပေးပါသည်။ ဒါဟာရေရှည်တည်တံ့အချက်ပြမှုများ dopamine receptors ၏မြစ်အောက်ပိုင်း intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းအသုံးပြုပုံတစ်နောက်ဆက်တွဲခြေလှမ်းမှာတွက်ချက်ကြသည်ဖြစ်နိုင်သောနေဆဲဖြစ်သည်။
ကြွက်ဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်အဖြစ်အတော်များများအုပ်စုများ dopamine လွှတ်ပေးရန်လုပ်မယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိပါပြီ5,7,8,9,10,11, မြင့်တက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်များကုဒ်သွင်းနှင့်ကိုက်ညီ။ တချို့ကကြွက်လျှင်မြန်စွာတန်ဖိုးများကိုမေ့လျော့ဖြစ်စေကြောင်းစိတ်ထင်အားဖြင့်ဤ dopamine ရိုးရိုးရှင်းစွာ RPEs ရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုစောဒကတက်ခဲ့ကြ48 ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုတစ်ဦးအတိုင်အစုရှိသည်49။ ဒါကအဆုံးစွန်စိတ်ကူးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်လျင်မြန်စွာတွေကိုမှ RPE ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှု (ပုံအားနည်းဖြစ်လာနေချိန်မှာအဆက်ဆက်ဆုလာဘ်၏တိုတောင်းတဲ့ sequence ကိုအတွင်းပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာ, updated ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာစမ်းသပ်ဖို့တရားခွင်ကနေ modulated ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာရေးကထောက်ခံသည်မဟုတ်။ 3e) ။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, အရာ dopamine အတွက်မဆိုသီအိုရီတစ်ခုတည်းကိုသာ RPEs (သင်ယူမှုအချက်ပြမှုများ) ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော mesolimbic dopamine နဲ့လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအလွန်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အကောင့်မပေးနိုငျသဘောဆောငျ16။ အဆိုပါ NAc core ကို conditional လှုံ့ဆော်မှုဖို့အလွန်အမင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ပေမယ့်ဆုလာဘ်ရရှိရန်အချိန်ကုန်အလုပ်ဖျော်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ50။ NAc core ကို dopamine ကြောင့်အလုပ်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကျိုးနပ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြောင်းလဲနေသော signal ကိုပေးပုံပေါ်5,44, ဒီ signal ကို VTA dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါသော်လည်း။
တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကိုမီချီဂန်တက္ကသိုလ် (သို့) ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတိရစ္ဆာန်အသုံးပြုမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကော်မတီများကအတည်ပြုသည်။ ကြွက်အထီး (300-500 ဂရမ်, ရိုင်း -type အမျိုးအစား Long-Evans သို့မဟုတ် TH-Cre ဖြစ်စေ+ တစ်ဦးကို Long-အီဗန်နောက်ခံနှင့်အတူ52) တစ်ဦးပြောင်းပြန် 12 အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်: 12 အလင်း: မှောင်မိုက်တဲ့သံသရာများနှင့်မှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကြွက်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကာလအတွင်းရရှိခဲ့အစားအစာဆုလာဘ်အပြင်နေ့စဉ်စံဓာတ်ခွဲခန်းကြွက် Chow ၏ 15 ဂရမ်ကိုလက်ခံရရှိ, ရစေရန်ဆုံးရှုံးစားရကြ၏။ အဘယ်သူမျှမနမူနာအရွယ်အစား precalculation ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်စဉ်အတွင်းခွဲဝေဖို့မကျြစိကှမခံခဲ့ရပါ။
ယခင်ကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော Med Associates အော်ပရေတာခန်းများ (အကျယ်ဆုံးအမှတ် ၂၅ စင်တီမီတာ ၃၀ စင်တီမီတာ) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။5။ ဒမြ-တာဝန်အစည်းအဝေးများအောက်ပါ parameters များကိုအသုံးပြုကြသည်: ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရှည်ကျပန်းတစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုရွေးချယ် 35-45 စုံစမ်းကြ၏ Go ကို cue 500-1,500 ms (ယူနီဖောင်းဖြန့်ဖြူး) ဖြစ်ခဲ့သည်မတိုင်မီကာလကိုင်; ကျန်ရစ်ညာဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ electrophysiology, photometry, voltammetry နှင့်ယခင်ကအစီရင်ခံ microdialysis ကြွက်များအတွက် (10, 50 နှင့် 90% ခဲ့ကြသည်5) သို့မဟုတ် 20, 50 နှင့် 80% (အသစ်အစီရင်ခံ microdialysis ကြွက်) ။
လက်ရှိဆုလာဘ်နှုန်းကိုအချိန်-based leaky-ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ခန့်မှန်းခဲ့သည်53။ ဆုလာဘ်နှုန်းသည်အကျိုးကိုရရှိခဲ့ခဲ့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အဆတိုးနှင့် parameter များကသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းအဆလောင်းပုပ်ပျက်သွားခဲ့ပါတယ် τ (အကျိုးကိုမှုနှုန်း ~ 63% အထိလျော့ချဖို့အတှကျ့အတွက်အချိန်အကြောင်း, 1-1 / အီးဖြစ်ပါတယ်) ။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်, τ တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွက်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့်မှတ်တမ်းများအကြား (အနုတ်လက္ခဏာ) ဆက်စပ်မှု (အောင်းနေချိန်) ပူးတွဲတင်ပြထားသည်ကြွက်ရဲ့အပြုအမူများ၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ forebrain dopamine နဲ့ဆုလာဘ်မှုနှုန်းအကြားဆက်စပ်မှု၏ဤရွေးချယ်မှုမှအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံကြဘူး τ (ဒေတာများသတိုးချဲ့။ 1).
ဆုလာဘ်မှုနှုန်းတွင် 'တိုးပွားလာ' သို့မဟုတ် '' လျော့ကျလာ '' အဖြစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုခွဲခြားဖို့ကျနော်တို့နောက်ဆက်တွဲပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ပထမဦးဆုံး5မိအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဆုလာဘ်နှုန်းမှာတစ်ဦးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏နောက်ဆုံး 8 မိအတွက်ပျမ်းမျှအား leaky-ပေါင်းစပ်ဆုလာဘ်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
electrophysiology နှင့် photometry အတွက်အသုံးပြုသည့်ကြွက်များသည် Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတူတကွပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခန်းတစ်ခန်းလုံးတွင်အခန်းတစ်ခန်းလုံးတွင်အိမ်မှုကိစ္စများပါဝင်သည်။ အာရုံသုံးမျိုး (2 kHz,5kHz နှင့်9kHz) အစားအစာဖြန့်ဝေ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားခြားနား (ကြွက်ကိုဖြတ်ပြီးချိန်ခွင်လျှာ) နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းကြာချိန် ၂.၆ စက္ကန့်ကြာအောင်အသံများကိုအသံအတိုးအကျယ် pips (၁၀၀ ms၊ ၅၀ ms off) အနေဖြင့်ကစားခဲ့သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုမရှိသောဆုလာဘ်များကိုကြိုတင်ကြားဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ကြားဖြတ်စစ်ဆေးမှုကြားခံ (၁၅ မှ ၃၀ ရက်၊ ယူနီဖောင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း) ဖြင့်ပေးအပ်သည်။
ကြွက် cortex နဲ့ striatum အတွက်လမ်းညွှန် cannulae (CMA, 830 9024) နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စု (n = 8) ပဏာမနှင့် infralimbic cortex (anteroposterior (AP) +3.2 mm, bregma နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလယ်အလတ် (ML) ၀.၆ မီလီမီတာနှင့် ဦး နှောက်မျက်နှာပြင်အောက် ၁.၄ မီလီမီတာ) (dorsoventral (DV) ၁.၄ မီလီမီတာ) ဦး နှောက်နှင့် ဦး နှောက်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိ dorsoventral (DV) ၁.၄ မီလီမီတာကိုပစ်မှတ်ထားသောလမ်းညွှန်အမြောက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် hemisphere (AP +0.6, ML 1.4 နှင့် DV 1.3) ၌တည်၏။ implants နှစ်ခုစလုံးသည် rostral-caudal လေယာဉ်တစ်လျှောက်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ၅ ဒီဂရီဝေးသောကြောင့်ထောင့်တစ်နေရာမှရွေ့လျားခဲ့သည်။ ဒုတိယအုပ်စု (n = 4) anterior cingulate cortex (AP +1.6, ML 0.8 နှင့် DV 0.8) ကိုပစ်မှတ်ထားသောလမ်းညွှန်ဆေးခြောက်တစ်ချောင်းနှင့်အခြားပစ်မှတ်ထားသည့် accumbens (AP +1.6, ML 1.4 နှင့် DV 5.5 ရှိဆန့်ကျင်ဘက်ခြမ်းရှိ core / shell ကိုရရှိခဲ့သည်။n = 2) သို့မဟုတ် AP +1.6, ML 1.9 နှင့် DV 5.7 (n = 2) ။ implants နှစ်ဖက်ကြွက်ကိုဖြတ်ပြီးချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုပြန်လည်မလေ့ကျင့်မီတစ်ပတ်ကြာပြန်လည်သက်သာခွင့်ပြုခဲ့သည်။
မိုဘိုင်းအဆင့်များအတွက်ရေ၊ မက်သနောနှင့်အက်စီတွန်နိုက်သည် VWR (Radnor) မှ ၀ ယ်ယူသည့် Burdick & Jackson HPLC အဆင့်ဖြစ်သည်။ အခြားဓာတုပစ္စည်းများကို Sigma Aldrich မှ ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ အတု cerebrospinal အရည် (aCSF) တွင် ၁၄၅ မီလီမီတာ NaCl၊ ၂.၆၈ မီလီမီတာ KCl၊ ၁.၄၀ မီလီမီတာ CaCl ပါဝင်သည်။2, 1.01 MM MgSO4, 1.55 MM Na2HPO4 နှင့် 0.45 MM nah2PO4, NaOH နှင့်အတူ 7.4 မှ pH ကိုချိန်ညှိ။ အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ် (250 nm နောက်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှု) Analytics ၏ဓာတ်တိုးလျှော့ချဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် HPLC-က MS
စမ်းသပ်ခြင်းနေ့ရက်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် houselight အပေါ်နှင့်အတူအော်ပရေတာအခန်းနေရာချပေးခဲ့သည်။ custom-ဖန်ဆင်းအာရုံစူးစိုက်မှု polyacrylonitrile အမြှေးပါး microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး (1-မီလီမီတာ dialysing AN69 အမြှေးပါး, Hospal) လမ်းညွှန် cannula သို့မြန်မာနိုင်ငံသဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် equilibration ခွင့်ပြု 400 မိဘို့2μl / မိနစ်မှာ aCSF နှင့်အတူအစဉ်မပြတ် (Chemyx, Fusion 90) perfused ခဲ့ကြသည်။ 5-မိအခြေခံစုစည်းပြီးနောက် houselight ဒမြ-တာဝန်ရရှိနိုင်မှုဖို့တိရိစ္ဆာန် cueing, ငွိမျးခဲ့သည်။ နမူနာစုဆောင်းခြင်း 1-မိကြားကာလများနှင့်နမူနာမှာဆက်လက်ချက်ချင်း derivatized ခဲ့ကြသည်54 ၁.၅ မီလီမီတာဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်၊ ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ 1.5 μl benzoyl ကလိုရိုက် (acetonitrile အတွက် 100% (v / v) benzoyl ကလိုရိုက်); ၁.၅ µl isotopically တံဆိပ်ကပ်ထားသောအတွင်းပိုင်းစံအရောအနှောကို ၁% (v / v) ပါဝင်သည့် acetonitrile ၅၀% (v / v) တွင်အရည်ရောစပ်ပြီး၊ deuterated ACh နှင့် choline (C / D / N isotopes) နှင့် ပေါင်း၍ ၂၀ ၏နောက်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှု nM ။ ကျိုးပဲ့နေသောအမြှေးပါးတစ်ခုတည်းစီးရီး (1.5 နမူနာစီးရီးစုစုပေါင်း) အတွက်ရလဒ်တစ်ခု session တစ်ခုမှလွဲ။2အစည်းအဝေးများအသီးအသီးအတွက် 1.5- s ကြားကာလမှာနမူနာစီးရီးနမူနာစုဆောင်းမှုနှစ်ခုအကြား alternated ။ နမူနာများကို Thermo Scientific UHPLC စနစ်များ (Accela, သို့မဟုတ် Vanquish Horizon) သည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး HESI II ESI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့် Quantum Ultra သုံးဆ quadrupole အစုလိုက်အပြုံလိုက် Spectrometer ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ငါး microlitre နမူနာများကို Phenomenex core-shell biphenyl Kinetex HPLC ကော်လံ (၂.၁ မီလီမီတာ× ၁၀၀ မီလီမီတာ) တွင်ထိုးသွင်းခဲ့သည်။ ရွေ့လျားမှုအဆင့် A သည် ၁၀ မီလီမီတာ ammonium formate ဖြစ်ပြီး ၀.၁၅% formic acid နှင့်မိုဘိုင်းအဆင့် B သည် acetonitrile ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း mobile phase သည် elution gradient ကို 50 μl / min သို့အောက်ပါအတိုင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ ကန ဦး၊ 1% B; 20 မိ, 30% B; ၁ မိနစ်၊ ၂၆% B၊ 26 မိနစ်, 51% B; ၂.၅ မိနစ်၊ ၁၀၀% ခ၊ ၃ မိနစ်၊ ၁၀၀% ခ၊ ၃.၁ မိနစ် ၅% B၊ ၃.၅ မိနစ်၊ ၅% ၃. ခ Thermo Xcalibur QuanBrowser (Thermo Fisher Scientific) သည်ထိပ်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ရှိသောထိပ်တစ်ခုစီကိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုကိုသေချာစေရန်တစ် ဦး ချင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
အားလုံး neurochemical အာရုံစူးစိုက်မှုဒေတာ (ကသုံးမှတ်ရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှနှင့်အတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်y′= [0.25 × (y-1) + 0.5y + 0.25 × (y+ 1)]) နှင့် z- အပြန်အလှန်နှိုင်းယှဉ်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွင်းပုံမှန်ရမှတ်များ။ ပစ်မှတ်ဒေသတစ်ခုစီအတွက် session တစ်ခုစီအတွက် cross-correlogram ကိုထုတ်ပေးပြီးအစည်းအဝေးများ၏ပျမ်းမျှအားစီစဉ်ခဲ့သည်။ ခွဲတမ်းတစ်ခုစီအတွက်တစ်ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်မှုနယ်နိမိတ်ကိုတစ်ချိန်တည်းစီးရီးများအကြိမ် ၁၀၀,၀၀၀ ပြောင်း။ သင်ခန်းစာတစ်ခုစီအတွက်ဆက်စပ်သောကိန်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အကွိမျမြားစှာဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ရလဒ် variable ကိုနှင့်အမူအကျင့်မက်ထရစ်အဖြစ် neurochemical နှင့်အတူ, MATLAB ကိုအတွက် regress function ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးမျိုးသောနှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက် Bonferroni-correction (alpha / (၂၁ ဓာတုပစ္စည်း× ၇ ဒေသ× ၉ အပြုအမူဆိုင်ရာ regressors)) အတွက် Regression Coefficients သုံးခုကို (100,000, 0.05 နှင့် 0.0005) တွင်သိသာစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အချက်အလက်များကိုအသွားအပြန်အချိန်ပါ ၀ င်သောနမူနာကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ၃ မိနစ်ခေတ်သို့ binned ခဲ့ကြသည်။
ကြွက် (n သီးခြားဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမောင်းနှင်နိုင်သောမှန်ဘီလူးများဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို (၁၂.၅ မီလီမီတာ nichrome ဝါယာကြိုး၊ Sandvik မှတည်ဆောက်ထားသည့်) tetrodes ၁၆ ခုပါဝင်ပြီး ၂၀၀ မီလီမီတာ optic fiber ၏ဘေးထွက်တွင်ကပ်လျှက်ရှိပြီး fiber အစွန်အဖျားအောက် ၅၀၀ μmအထိတိုးချဲ့သည်။ တူညီသောခွဲစိတ်မှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် 25 μl AAV16 / 12.5-EF200a-DIO-ChR500 (H1R) -EYFP ကိုဘေးတိုက် VTA (AP 2, ML 5, DV 1) သို့မဟုတ် NAc core သို့ထိုးသွင်းခဲ့သည် (AP 2, ML 134, DV 5.6) ။ Wideband (၁-၉၀၀၀ Hz) ဦး နှောက်အချက်ပြမှုများကို Intan digital headstages ကိုအသုံးပြုပြီး (တစ်စည်လျှင်နမူနာ ၃၀,၀၀၀) ကိုနမူနာယူခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင် session ရဲ့အဆုံးမှာ Optrodes အနည်းဆုံး 0.8 μmလျှော့ချခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းယူနစ်များကို MountainSort ၏ MATLAB အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အသုံးပြု၍ အော့ဖ်လိုင်းခွဲထုတ်ထားသည်55 သတိထားလက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
သီးခြား VTA-ဌယူနစ် dopaminergic (TH ခဲ့ရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့+), ကျနော်တို့ကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ဆက်စပ်အောင်းနေချိန်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့56။ အကျဉ်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ် session ရဲ့အဆုံးမှာကျနော်တို့ကလေဆာရောင်ခြည် diode ဖို့ optrode ချိတ်ဆက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော width နဲ့ကြိမ်နှုန်း၏အလင်းသွေးခုန်နှုန်းရထားကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ အလင်း-တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခံရဖို့တစ်ယူနစ်များအတွက်၏အရေးပါမှုအဆင့်အထိရောက်ရှိရန်လိုအပ် P <0.001 5-ms နှင့် 10-ms သွေးခုန်နှုန်းရထားများအတွက်။ ငါတို့သည်လည်း (လေဆာသွေးခုန်နှုန်းစတင်ခြင်း၏ 10 ms အတွင်း) အလင်း evoked waveforms session တစ်ခု - ပျမ်းမျှနှိုင်းယှဉ်; အားလုံးအလင်း - evoked ယူနစ်> 0.9 တစ် Pearson ဆက်စပ်မှုကိန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ Dopamine အာရုံခံများကို VTA-l AAV ပြုတ်ရည်ဖြင့်ကြွက်လေးခုမှအောင်မြင်စွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည် (IM657, ၁ ယူနစ်; IM1, ၃ ယူနစ်; IM1002, ၁၅ ယူနစ်; IM3, ၉ ယူနစ်) နှင့်ကြွက်တစ်ကောင် NAc core AAV (IM-1003, 15 unit) ။ Peak width ကိုအမြင့်ဆုံး - width-at-half-maximum အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတူညီတဲ့၊ ပျမ်းမျှဆူး waveform ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအနှုတ်လက္ခဏာအစိတ်အပိုင်းကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ session-wide ပစ်ခတ်မှုနှုန်း> 1037 Hz နှင့်အထွတ်အထိပ်အကျယ် <9 μsနှင့်အတူ Non-tagged VTA အာရုံခံဆဲလ် Non-dopamine ဆဲလ်အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် dopamine နှင့် dopamine မဟုတ်သောဆဲလ်များကိုတူညီသောတိုင်းဒေသကြီးများတွင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်သေချာစေရန်အနည်းဆုံး optically tagged dopamine ဆဲလ်တစ်ခုနှင့်အတူအစည်းအဝေးများအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသော dopamine ဆဲလ်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
Spike ပြီးတော့ Activision နေတာသမရိုးကျ '' 80 / 160 template ကို '' ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်57: အပြန်အလှန် spike-intervall ကို 80 ms သို့မဟုတ်ဒီထက်နည်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတစ်ခုချင်းစီသည် 160 ms သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကြားကာလသည်အထိ, ဤနှင့်နောက်ဆက်တွဲ spikes တစ် ဦး ပေါကျကှဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ ဆုချီးမြှင့်မှုအတွက် 'လုပ်သူများ' ပစ်ခတ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, dopamine spikes 1 မိနစ် bins အတွက်ရေတွက်ခဲ့သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောအပြောင်းအလဲများကိုစစ်ဆေးရန်၊ spike သိပ်သည်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို 20 Gss ကှဲလှဲထားသော Gaussian kernel ဖြင့် spike ရထားများဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ အာရုံခံဆဲလ်တစ်ခုမှပေးထားသော cue တစ်ခုအားမည်မျှလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် 40-ms bins (၂၀ မိနစ်၏အဆင့်များသို့လျှောကျသွားခြင်း) ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး cue စတင်ခြင်းပြီးနောက်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် shuffle test (20 shuffles) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ချက်ချင်း cue ရှေ့ 10,000 ms ။ post-cue ပစ်ခတ်မှုနှုန်းသိသိသာသာဖြစ်သည့်မှာပထမ ဦး ဆုံးဘင် (P <0.01, မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်ဆုံး) အခြေခံပစ်ခတ်မှုထက်သာ။ ကြီးမြတ်တုံ့ပြန်မှု cue ဖို့အချိန်စဉ်းစားခဲ့သည်။
peak ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းခြမ်း-in ကိုဆုခခြံစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အပြီး 250-ms ဝင်းဒိုးကိုစီရုံးတင်စစ်ဆေးအများဆုံး (Gaussian-ပန်းခင်းလမ်း) ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်, ထိုချိုင့်ဝှမ်းကိုစတင်တစ်ဦး 2-s ကိုပြတင်းပေါက်၌နိမ့်ဆုံးပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည် unrewarded စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အခြမ်း-in ကိုအပြီးတစ်စက္ကန့်။
ချဉ်းကပ်နည်းအပြုအမူတွေကာလအတွင်းတစ်ဦးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ထောင့်တွက်ချက်ဖို့ကျနော်တို့တစ် 50-ms Gaussian kernel ကိုအတူယုတ်ပစ်ခတ်နှုန်းထားများပန်းခင်းလမ်းအလယ်ဗဟို-In သို့မဟုတ်အစားအစာ-port ကို-in ကို (တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်မတိုင်မီတစ် 0.5-s ကိုပြတင်းပေါက်၌ရရှိလာတဲ့ signal ကိုအများဆုံး / နိမ့်ဆုံးတွေ့ရှိ ) နှင့်နှစ်ဦးကို extrema ဆက်သွယ်ထားသောလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ထောင့်စေ့အောင်တိုင်း။ '' မြင့်သော 'နဲ့' အနိမ့် '' ဆုလာဘ်လုပ်ကွက်များတွင်ပစ်ခတ်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့, တစ်ဦးချင်းစီ session များအတွက်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ပျမ်းမျှအား leaky-ပေါင်းစပ်ဆုလာဘ်နှုန်းမှာတစ်ဦးပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒီမှာပြ fast-scan ကသိသိ voltammetry ရလဒ်များကိုယခင်ကအသေးစိတ်အတွက်တင်ပြဒေတာ reanalyse5။ အတွင်း-ရုံးတင်စစ်ဆေးတန်ဖိုးနှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းမှားယွင်းမှုများကိုအတိအကျအဖြစ်ယခင်ကဖော်ပြထား, မော်ဒယ်သင်ယူနေတဲ့ Semi-Markov ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြည့်သုံးပြီးတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်ပြည်နယ်၏ခန့်မှန်းချက်5.
ကျနော်တို့ဗီဇကုဒ်သွင်း optical dopamine အာရုံခံဖော်ပြမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြု dLight15။ isoflurane မေ့ဆေး, AAV1-CAG-dLight9μl (1 × 10) လက်အောက်တွင်12 ml နှုန်းဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇ; UC Davis ၏အားနည်းချက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်း (100 nl / min) (Nanoject III, Drummond) ကို 30- µm ဖန်ခွက် micropipette မှတဆင့် ventral striatum (AP: 1.7 mm, ML: 1.7 mm, DV: -7.0 mm) ဖြင့်ထိုးသွင်းသည်။ တူညီသောခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်စဉ်ကာလအတွင်းသတ္တုဒြပ်ထည် (Doric) နှင့်တွဲဖက်ထားသော optical fiber (400 μm core၊ 430-μmစုစုပေါင်းအချင်း) ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီး (ပစ်မှတ်အနက်အနက် 200 µm AAV ထက်ပိုမိုမြင့်မား) နေရာတွင်ခိုင်မြဲသည်။ dLight ဖော်ပြမှုကိုခွင့်ပြုရန်ဒေတာများကို> သုံးပတ်အကြာတွင်စုဆောင်းခဲ့သည်။
dLight စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြာရောင် (470 nm) နှင့်ခရမ်းရောင် (405 nm; control) အတွက် LEDs များသည်ကွဲပြားသောကြိမ်နှုန်း (211 Hz နှင့် 531 Hz, အသီးသီးတွင် modulated ခဲ့ကြသည်။58) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအချက်ပြမှုနှစ်မျိုးလုံးသည် minicube filter များ (Doric) မှဖြတ်သန်းသွားသောနှင့်အမြောက်အများချောင်းကို femtowatt detector (Newport, Model 2151) 10 kHz ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်သီးခြားစီ 470 nm (dopamine) နှင့် 405 nm (control) အချက်ပြများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးစတုရန်းမိုင်ကိုက်ညီခြင်းမှတစ်ဆင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့သည်58။ ဒဿမကိန်းချောင်း signal ကို (ဃF/F) ထို့နောက် (470-405_fit) / 405_fit အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအားလုံးအတွက်ဤအချက်ပြမှုသည် 50 Hz အထိကျဆင်းသွားပြီးပျမ်းမျှ filter ၅ ခုဖြင့်ချောမွေ့သည်။ သီးခြားစီ 470 nm နှင့် 405 nm အချက်ပြတင်ပြချက်အတွက် Extended Data Fig ကိုကြည့်ပါ။ 7.
တစ်ဦး optic fiber ကိုနေရာချထားခြင်းမှဒေတာများဖိုက်ဘာအစွန်အဖျား NAc ခဲ့လျှင်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခြင်း, အနည်းဆုံးတာဝန် cue ဖို့ချောင်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့ကြသည် z> 1 ၏ရမှတ် ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်ကြွက်တစ်ကောင်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး dLight1065 အတွက်ကြွက်သုံးကောင် / နေရာ ၄ ခု (IM1066-left, IM1089-နှစ်ဘက်၊ IM1.1-right) နှင့်ကြွက်လေး / နေရာခြောက်ခု (IM1088-bilateral, IM1105-right, IM1106-bilateral, dLight1107b များအတွက် IM1.3- ညာဘက်) ။ အလားတူရလဒ်များကို dLight1.1 နှင့် dLight1.3 (တိုးချဲ့ဒေတာများကိုပုံ။ ) အတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည် 7), ဒေတာပေါင်းစပ်ခဲ့ကြဒါ။
ချဉ်းကပ်နည်းအပြုအမူတွေကာလအတွင်းတစ်ဦးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ထောင့်တွက်ချက်ဖို့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ် (စင်တာ-In သို့မဟုတ်အစားအစာ-port ကို-in ကို) ရှေ့တော်၌ 0.5-s ကိုပြတင်းပေါက်၌ရရှိလာတဲ့ signal ကိုအများဆုံး / နိမ့်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိထိုသူနှစ်ယောက် extrema ဆက်သွယ်ထားသောလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ထောင့်စေ့အောင်တိုင်း။
ဆှဖှေဲ့နှင့် dLight1.3b ၏မော်လီကျူးတိကျတဲ့
စသည်တို့တိုင်းတာခုနှစ်တွင်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ15။ အကျဉ်းခုနှစ်, HEK293T (ATCC CRL # 1573) ဆဲလ်တွေယဉ်ခဲ့ကြပြီး CMV ကမကထမောင်းနှင် dlight1.3b ကုဒ်သွင်း plasmids နှင့်အတူ transfected နှင့် HBSS (ဘဝ Technologies က) နဲ့ဆေးကြော Ca နှင့်အတူဖြည့်ဆည်း2+ (4mM) နှင့် Mg2+ (2 မီလီမီတာ) ပုံရိပ်မတိုင်မီ။ ပုံရိပ်ကို ၄၀ ×ဆီအခြေခံသည့်ရည်မှန်းချက် အသုံးပြု၍ လှည့်လည်သွားသောလှိုင်းအလျား ၄၈၈ nm / 40 nm (Zeiss Observer LSN710 confocal microscope) တွင်အသုံးပြုသည်။ အာရုံခံကိရိယာ၏ချောင်းတုံ့ပြန်မှုများကိုစမ်းသပ်ရာတွင် neurotransmitter ကိုအနည်းဆုံးလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်ချက်နှစ်ခုတွင်အချိန် - ချိန်ပုံရိပ်စဉ်အတွင်းရေချိုးရန်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။ dopamine နှင့် noradrenaline တို့၏ Titrations သည်ကွဲပြားခြားနားသောရှစ်မျိုးကိုရရှိရန်အတွက်ဆယ်ဆအမှတ်စဉ် dilution များပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ အခြား neurotransmitter များအားလုံးကို sequential ပြင်းအား (488 nM, 513 μMနှင့် 100 μM) တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အားလုံး neurotransmitter ပြင်းအားလတ်ဆတ်ပြင်ဆင် HBSS အတွက် 1 မီလီမီတာစတော့ရှယ်ယာအာရုံစူးစိုက်မှုကနေ dilution ဖြင့်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အချိန်ချုံးပုံရိပ်ကနေကုန်ကြမ်းချောင်းပြင်းထန်ဖီဂျီအပေါ်တွက်ချက်ကြသည်ဟူ။ ၎င်း, ROI တစ်ခုစီသည်ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏အမြှေးပါးပေါ်တွင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ချောင်းခြံပြောင်းလဲမှု (ΔF/F) အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည် F အထွတ်အထိပ် (ပျဉ်ပြားလေးချောင်း၏ချောင်းပြင်းအား) - F Basal (ligands ၏ထို့အပြင်မတိုင်မီလေးဘောင်၏ချောင်းပြင်းထန်မှုပျမ်းမျှ) /F Basal ။ ဂရပ်များနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ GraphPad Prism ကို6သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဒေတာကိုမှတ်ရရှိရန်တစ်-site ကိုတိကျသောစည်းနှောင်ကွေးမထိုက်မတန်နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် Kd တန်ဖိုးများ။ သေတ္တာ-and ပါးမုနျးမှေးမြေကွက်၌, box ကို% အကွာအဝေး 25 နှင့်ပါးသိုင်းမွေးအများဆုံးတန်ဖိုးများနိမ့်ဆုံးကနေချဲ့ထွင်ဖို့ 75% ကိုဖုံးလွှမ်း။
သုတေသနဒီဇိုင်းကိုအပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာရရှိနိုင် သဘာဝတရားသုတေသနအစီရင်ခံအကျဉ်းချုပ် ဤစာတမ်းနှင့်ဆက်စပ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ AAV.Synapsin.dLight1.3b ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျှမ (Addgene နှင့်အတူအပ်နှံထားပြီး 125560 ။ http://www.addgene.org) ။ ဒေတာအားလုံးကိုကွန်ပျူတာတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသုတေသနမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်မည် (https://doi.org/110.6080/K0VQ30V9).
custom MATLAB ကိုကုဒ် JDB ထံမှတောငျးဆိုခကျြအပျေါရရှိနိုင်
ထုတ်ဝေသူရဲ့မှတ်စု: Springer သဘာဝတရားထုတ်ဝေမြေပုံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကြားနေဆဲဖြစ်သည်။
Pan, WX, Schmidt, R. , Wickens, JR & Hyland, BI Dopamine ဆဲလ်များသည်ဂန္ထဝင်အေးစက်နေစဉ်ကာလအတွင်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုတုံ့ပြန်သည် - အကျိုးကျေးဇူးရရှိသည့်လေ့လာသင်ယူမှုကွန်ယက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောသဲလွန်စများသက်သေသာဓက။ ဂျေ neuroscience. 25, 6235-6242 (2005) ။
အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ၌ဆုလာဘ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်အဘို့အ Cohen ကို, JY, Haesler, အက်စ်, Vong က, အယ်လ်, ဝယျလျ, BB & Uchida, N. Neuron-type ကို - တိကျတဲ့အချက်ပြမှုများ။ သဘာဝ 482, 85-88 (2012) ။
Steinberg, EE et al ။ ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ, dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့်သင်ယူမှုတို့အကြားတစ်ဦးကကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကို။ နတ်။ neuroscience. 16, 966-973 (2013) ။
ဟာမစ်, AA ကို et al ။ Mesolimbic dopamine အလုပ်၏တန်ဖိုးအချက်ပြလိုက်ခြင်း။ နတ်။ neuroscience. 19, 117-126 (2016) ။
Saiders, BT, Richard, JM, Margolis, EB & Janak, PH Dopamine အာရုံခံများသည် Pavlovian အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများကိုလှိုင်းတံပိုးဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ နတ်။ neuroscience. 21, 1072-1083 (2018) ။
Phillips, PE, Stuber, GD, Heien, ML, Wightman, RM & Carelli, RM Subsecond dopamine ဖြန့်ချိခြင်းသည်ကိုကင်းရှာခြင်းကိုအားပေးသည်။ သဘာဝ 422, 614-618 (2003) ။
Ro, PF, Stuber, GD, Phillips, PE, Wightman, RM & Carelli, RM Dopamine သည်အစားအစာရှာဖွေခြင်း၏ဒုတိယဆင့်ကိုပြုပြင်သည်။ ဂျေ neuroscience. 24, 1265-1271 (2004) ။
Wassum, KM, Ostlund, SB & Maidment, NT Phasic mesolimbic dopamine အချက်ပြမှုသည်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်မိမိစတင်လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခန့်မှန်းသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 71, 846-854 (2012) ။
Howe, MW, Tierney, PL, Sandberg, SG, Phillips, PE & Graybiel, AM striatum အချက်ပြမှုအတွက်ရှည်လျားသော dopamine အချက်ပြမှုသည်နီးကပ်မှုနှင့်ဝေးကွာသောအကျိုးကျေးဇူးများ၏တန်ဖိုးကိုဖော်ပြသည်။ သဘာဝ 500, 575-579 (2013) ။
Syed, EC အ et al ။ လှုပ်ရှားမှုစတင်အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏ mesolimbic dopamine encoding ကပုံစံသွင်းသွင်း။ နတ်။ neuroscience. 19, 34-36 (2016) ။
Morris, G. အ, Nevet, အေ, Arkadir,,, Vaadia, E. & Bergman, H. Midbrain dopamine အာရုံခံများသည်အနာဂတ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို encode လုပ်သည်။ နတ်။ neuroscience. 9, 1057-1063 (2006) ။
အက်ဒ်၊ ပါဂျောင်၊ V. နှင့်ကော့စ်၊ RM ဒိုပါမင်အာရုံခံဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီလှုပ်ရှားမှုစတင်တံခါးများနှင့်အနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအားကောင်းစေသည်။ သဘာဝ 554, 244-248 (2018) ။
dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်မသေချာမရေရာ၏ Fiorillo, CD ကို, Tobler, PN & Schultz, ဒဗလျူ Discrete coding ။ သိပ္ပံ 299, 1898-1902 (2003) ။
ဖခင်အုပ်စိုး, တီ, ချို, JR, Merten, K. , Howe, မဂ္ဂါဝပ်, et al ။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဗီဇ encoded အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူ dopamine ဒိုင်းနမစ်၏ Ultrafast အာရုံခံပုံရိပ်။ သိပ္ပံ 360, eaat4422 (2018) ။
Salamone, JD & Correa, အမ် mesolimbic dopamine ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အာရုံခံဆဲလျ 76, 470-485 (2012) ။
Schultz, dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol. 80, 1-27 (1998) ။
Garris, PA & Wightman, RM ကွဲပြားခြားနားသော kinetics များသည် amygdala, prefrontal cortex နှင့် striatum ရှိ dopaminergic transmission ကို in vivo voltammetric study တစ်ခုတွင်အုပ်ချုပ်သည်။ ဂျေ neuroscience. 14, 442-450 (1994) ။
Frank, MJ, Doll, BB, Oas-Terpstra, J. & Moreno, F. Prefrontal နှင့် striatal dopaminergic မျိုးဗီဇများသည်ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းများတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ နတ်။ neuroscience. 12, 1062-1068 (2009) ။
စိန့် Onge, JR, Ah, S. , Phillips, AG & Floresco, pre-front cortex နှင့်နျူကလိယအတွင်းရှိ dopamine efflux ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း accumbens ။ ဂျေ neuroscience. 32, 16880-16891 (2012) ။
Bartra, O. , McGuire, JT & Kable, JW အဆိုပါတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းစနစ် - ပုဂ္ဂလဒိvalue္တန်ဖိုး၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုစစ်ဆေးသောရဲရင့်သော fMRI စမ်းသပ်ချက်များ၏သြဒီနိတ် -based meta-analysis သည်။ Neuroimage 76, 412-427 (2013) ။
Ikemoto, အက်စ် Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: အ ventral midbrain ကနေနှစ်ခု projection စနစ်များနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 56, 27-78 (2007) ။
အဘိဓါန် Breton-, JM et al ။ ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများနှင့်ကြွက်များတွင်အနာဂတ်ပစ်မှတ်အားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏မြေပုံ။ ဂျေ comp ။ Neurol။ (2018) ။
ဆိုးရွားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral tegmental inရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ Ungless, MA, Magill, PJ & Bolam, JP ယူနီဖောင်းတားစီး။ သိပ္ပံ 303, 2040-2042 (2004) ။
Morales, အမ် & Margolis, EB Ventral tegmental areaရိယာ: ဆယ်လူလာသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, ဆက်သွယ်မှုနှင့်အပြုအမူ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience. 18, 73-85 (2017) ။
မောရစ်, G. အ, Arkadir, D. , Nevet, အေ, Vaadia, အီး & Bergman, အိပ်ချ် Coincident ပေမယ့် midbrain dopamine နှင့် striatal လုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံ၏ကွဲပြားမက်ဆေ့ခ်ျ။ အာရုံခံဆဲလျ 43, 133-143 (2004) ။
dopamine အာရုံခံဆဲလ်ပစ်ခတ်မှု၏ Floresco, SB, West, AR, Ash, B. , Moore, H. & Grace, tonic နှင့် phasic dopamine ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုကွဲပြားခြားနားစွာညှိနှိုင်းသည်။ နတ်။ neuroscience. 6, 968-973 (2003) ။
တော်ကကျေးဇူး, schizophrenia နှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ pathophysiology အတွက် dopamine စနစ်၏ AA ကို Dysregulation ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience. 17, 524-532 (2016) ။
Cohen, JY, Amoroso, MW & Uchida, N. Serotonergic အာရုံခံများသည်အချိန်ကာလပေါင်းများစွာအတွက်ဆုလာဘ်နှင့်အပြစ်ပေးမှုကိုဖော်ပြသည်။ eLife 4, e06346 (2015) ။
Niv, Y. , Daw, N. & Dayan, P. အလုပ်လုပ်ရန်မည်မျှမြန်သည်။ တုန့်ပြန်မှုသန်စွမ်းမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် dopamine ဆေးများ။ Adv ။ အာရုံကြောအပေါ်က။ ဖြစ်စဉ်ကို။ Syst. 18, 1019 (2006) ။
Bayer, HM, Lau, B. & Glimcher, midbrain dopamine neuron spike ရထား၏ PW စာရင်းအင်းသည်နိုးနေသည့်မျောက်ဝံ၌ရှိသည်။ ဂျေ Neurophysiol. 98, 1428-1439 (2007) ။
Chergui, K. , Suaud-Chagny, MF & Gonon, Impulse စီးဆင်းမှု၊ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် dopamine ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့အကြားအကြားအက်ဖ် Nonlinear ဆက်ဆံရေး။ neuroscience 62, 641-645 (1994) ။
က Parker, အဲန်အက်ဖ် et al ။ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ဆိပ်ကမ်းအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်ရှေးခယျြမှု encoding က striatal ပစ်မှတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ နတ်။ neuroscience. 19, 845-854 (2016) ။
ကြွက်များတွင် ventral နှင့် posterior striatum အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ဝတ္ထုတွေကိုမှ Menegas, ဒဗလျူ, Babayan, BM, Uchida, N. & Watabe-Uchida, အမ်အတိုက်အခံကန ဦး ။ eLife 6, e21886 (2017) ။
Trulson, ME substantia nigra အာရုံခံ၏တစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ကြောင်ပြုမူ၏ caudate အတွက် dopamine ၏ voltammetric လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား. 15, 221-223 (1985) ။
အဆိုပါ striatum အတွက် dopaminergic ဂီယာ၏ Glowinski, ဂျေ, Chéramy, အေ, Romo, R. & Barbeito, အယ်လ် Presynaptic စည်းမျဉ်း။ cell ။ Mol ။ Neurobiol. 8, 7-17 (1988) ။
Zhou၊ FM၊ Liang၊ Y. & Dani၊ JA Endogenous နီကိုတင်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်မှုကိုလက်စတီနီယံလုပ်ငန်းသည် striatum တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။ နတ်။ neuroscience. 4, 1224-1229 (2001) ။
Threlfell, အက်စ် et al ။ Striatal dopamine လွှတ်ပေးရန် cholinergic interneurons အတွက်ညှိလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်အစပျိုးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 75, 58-64 (2012) ။
Cachope, R. et al ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်သေံ setting: cholinergic interneurons ၏ရွေးချယ် activation accumbal phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ cell အစီရင်ခံစာများ 2, 33-41 (2012) ။
Sulzer,,, Cragg, SJ & Rice, ME Striatal dopamine neurotransmission: လွှတ်ခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းစည်းမျဉ်း။ Basal Ganglia 6, 123-148 (2016) ။
Floresco, SB, Yang, CR, Phillips, AG & Blaha, CD Basolateral amygdala ဆွပေးမှုသည်မေ့ဆေးပေးလိုက်သည့်ကြွက်၏နျူကလိယ၌အချိုမှုဓာတုဗိုင်းရပ်စ်မှီခိုနေသည့် dopamine efflux ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 10, 1241-1251 (1998) ။
ဂျုံးစ်, JL et al ။ Basolateral amygdala နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် terminal ကို dopamine လွှတ်ပေးရန် modulates နှင့်တုံ့ပြန်အေးစက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 67, 737-744 (2010) ။
မျောက်အတွက်အမူအကျင့်ခလုတ်လှုံ့ဆော်မှုမှ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ Schultz, ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ ဂျေ Neurophysiol. 56, 1439-1461 (1986) ။
Berke, JD dopamine ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နတ်။ neuroscience. 21, 787-793 (2018) ။
Bromberg-Martin, ES, Matsumoto, M. & Hikosaka, O. နှစ် ဦး နှစ်ဖက် habenula နှင့် dopamine အာရုံခံများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်သူများနှင့် phasic anticipatory လုပ်ဆောင်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ 67, 144-155 (2010) ။
Pasquereau, B. & Turner, RS Dopamine အာရုံခံများသည်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင်အမှားအယွင်းများရှိသည်။ ဂျေ Neurophysiol. 113, 1110-1123 (2015) ။
dopamine အာရုံခံအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ Fiorillo, CD ကို, Newsome, WT & Schultz, ဒဗလျူအဆိုပါယာယီတိကျ။ နတ်။ neuroscience. 11, 966-973 (2008) ။
Morita, K. & Kato, A. Striatal dopamine ramping သည် cortico-basal ganglia ဆားကစ်များတွင်မေ့ခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အားဖြည့်သင်ယူမှုကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ တပ်ဦး။ အာရုံကြော Circuits 8, 36 (2014) ။
Gershman, SJ Dopamine ရိုးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်၏။ အာရုံကြော computing. 26, 467-471 (2014) ။
Nicola, SM အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုယူဆချက်: နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ပေါင်းစည်းရေးနှင့် cue-တုံ့ပြန်ယူဆချက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ activation အတွက် dopamine accumbens ။ ဂျေ neuroscience. 30, 16585-16600 (2010) ။
Paxinos, G. & Watson, C. Stereotaxic Coordinates အတွက် Rat ဦးနှောက် 5th edn (Elsevier ပညာရေးဆိုင်ရာ, 2005) ။
Witten, ခလရ et al ။ Recombinase-ကားမောင်းသူကြွက်လိုင်းများ: ကိရိယာများ, နည်းစနစ်များနှင့် dopamine-mediated အားဖြည့်ဖို့ optogenetic လျှောက်လွှာ။ အာရုံခံဆဲလျ 72, 721-733 (2011) ။
Sugrue, LP, Corrado, GS & Newsome, WT ကိုက်ညီသောအပြုအမူနှင့် parietal cortex တွင်တန်ဖိုး၏ကိုယ်စားပြုမှု။ သိပ္ပံ 304, 1782-1787 (2004) ။
Wong, JM et al ။ ဇီဝနမူနာအတွက် neurochemicals ၏ပစ်မှတ်ထား metabolomics များအတွက်အရည် Chromatography-အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry နှင့်အတူ Benzoyl ကလိုရိုက် derivatization ။ ဂျေ Chromatogr ။ တစ်ဦးက 1446, 78-90 (2016) ။
Chung, je et al ။ sorting နှုန်းကိုမြင့်တက်ဖို့တစ်ဦးကအပြည့်အဝ automated ချဉ်းကပ်။ အာရုံခံဆဲလျ 95, 1381-1394 (2017) ။
Kvitsiani, ဃ et al ။ prefrontal cortex နှစ်ခု interneuron အမျိုးအစားများကွဲပြားအပြုအမူနှင့်ကွန်ယက်ဆက်စပ်မှု။ သဘာဝ 498, 363-366 (2013) ။
Grace, AA & Bunney, BS nigral dopamine neuron များတွင်ပစ်ခတ်ခြင်းပုံစံကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဂျေ neuroscience. 4, 2877-2890 (1984) ။
Lerner, TN et al ။ နဂိုအတိုင်း-ဦးနှောက် SNc dopamine subcircuits ကသယ်ဆောင်ကွဲပြားအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်လေ့လာဆန်းစစ်။ ကလာပ်စည်း 162, 635-647 (2015) ။
ကျနော်တို့နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီနှင့်အကြံဉာဏ် P. ဒါယန်း, အိပ်ချ်လယ်ကွင်းများ, အယ်လ်ဖရန့်, C. Donaghue နှင့် T. Faust လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အစောပိုင်းဗားရှင်းအပေါ်သူတို့ရဲ့မှတ်ချက်များအဘို့နှင့် V. Hetrick, R. Hashim နှင့် T. Davidson ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, အာရုံကြောရောဂါများနှင့်လေဖြတ်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။
သဘာဝ ကျေးဇူးတင်စကားမာဂရက်ဆန်နှင့်ဤအလုပ်၏သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အလှူငွေများအတွက်အခြားအမည်မသိရှိ reviewer (s) ကို။
ဤရွေ့ကားစာရေးသူအညီအမျှလှူဒါန်းခဲ့: အလီ Mohebi, ဂျက်ဖရီ R. Pettibone
Neurology ကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဖရန်စစ္စကိုဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA, USA သို့တက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန
, ဂျက်ဖရီ R. Pettibone
& ယောရှုသည် Ber Berke
အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဘရောင်းတက္ကသိုလ်, Providence, RI က, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန
ဓာတုဗေဒဌာန, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore, MI, အမေရိကန်နိုင်ငံ
neuroscience ဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA, USA
ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်မော်လီကျူးဆေးပညာ, ဆေးပညာကျောင်း, ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Davis က, Davis က,, CA, USA သို့ဦးစီးဌာန
neuroscience နှင့် Kavli အခြေခံအာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အင်စတီကျု, ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဆန်ဖရန်စစ္စကို, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Weill အတှကျအင်စတီကျု
လေးဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် electrophysiology နှင့် photometry, နှင့်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ JRP RTKAAH အားဖြင့်ဂျေ-MTW နှင့်ကြီးကြပ်မှုထံမှအကူအညီနှင့်အတူ microdialysis ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ကနဦး photometry setup ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်, voltammetry ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ LTV retrograde သဲလွန်စများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ TP နှင့် LT အဆိုပါ dLight sensor နဲ့က Shared ကျွမ်းကျင်မှုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ JDB ဒီဇိုင်းနှင့်လေ့လာမှုကြီးကြပ်ခြင်း, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးသားခဲ့သည်။
စာပေးစာယူမှ ယောရှုသည်ဃ Berke.